Namoaka Didy Ny Fitsarana Ambony Ao Goatemala Fa Tsy Afaka Mandroaka ny Mpiantsoroka ny Ady Amin’ny Kolikoly Ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2017 9:06 GMT
“#OutWithJimmy. Nidina an-dalambe i Guatemala tsy misy tahotra .” Sary natao ho fanentanana nokarakarain'ny Meksikana-Goatemalà. Sary ôrizinaly navoakan'i Prensa Comunitaria ary nahazoana alàlana.
Niaina andro vitsivitsy tao anatin'ny fifandonana ara-politika goavana i Goatemala taorian'ny fikasan'ny Filoha Jimmy Morales handroaka an'i Ivan Velázquez, ilay lehiben'ny Vaomiera Iraisampirenena Miady amin'ny Tsimatimanota ao Guatemala (CICIG) izay tohanan'ny Firenena Mikambana, tamin'ny filazana azy ho “persona non grata.”
Nirotsaka an-tsehatra ankehitriny ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenan'i Guatemala, ary nanakana ny fanapahan-kevitry ny filoha ary nanambara fa nanao ny “tsy ara-dalàna” izy.
Maro ireo Goatemalteka no nahita ny fanapaha-kevitry ny fitsarana ho dingana mankany amin'ny ady amin'ny kolikoly, ary izany no antony iray hanaovan'izy ireo fankalazana antserasera:
Afomanga, tehaka, ary lahateny ho fankalazana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana izay nanamafy fa mijanona [ao Guatemala] i Ivan Velázquez ..
Mijanona i Ivan.
Tsy mbola azo antoka ny hoavin'ilay mpiantsoroka ny vaomiera, saingy ny fanohanana malaza sy ny fitokisana azy ao Goatemalà sy iraisampirenena dia manan-danja amin'ny fahombiazan'ny iraka nampanaovina ny CICIG: hanao famotopotorana mahaleotena amin'ny hetsika tsy ara-dalàna ataon'ny vondrom-piarovana, ny rafitra an-tsokosokon'ny raharaham-piarovana ary ireo mafia izay manohintohina ny fampanjakàna ny lalàna.
Iza ireo mpanohana ny filoha?
Eo ambanin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny Filoha Morales noho ny fanohanana ara-bola tsy ara-dalàna. Manohana azy ny parlemantera maromaro izay maro amin'izy ireo no nanaovana fanadihadiana ihany koa ary tohanan'ireo manampahefana monisipaly ihany koa izy. Nahazo fanohanana avy amin'ny filoha teo aloha sy ny sehatra mpandala ny mahazatra goavana indrindra ao Goatemala ihany koa izy, izay ahitana ny fiangonana neo-pentekôtista, ny fikambanan'ny miaramila zokiolona, ary ireo manam-pahaizana mpiaro ny fahalalahana ara-politika. Araka ny notaterin'i Raúl Bolaños tao amin'ny tranonkalan'ny fanaovan-gazety mpanadihady lalina Plaza Pública :
Ny fanohanan'ny filoha dia hita ao amin'ny kabary nasionalista, ao anatin'ny fandrahonana fampiasan-kery sy ny fanjavozavoan-kevitry ny sangany ao amin'ny rafi-pivavahana izay tsy mila tontolom-panjavozavoana. Namolavola ity tolona ity ny filoha ary nanohana ny tenany tao anaty fandalana ny mahazatra ara-pinoana sy nanampy ny fanindrahindrana ny nasionalisma tao anatin'ny fangaro iray manontolo.
Niha-nasiaka ny kabary, nampiasa teny masiaka ankolaka izay nampiasain'izy ireo nandritra ny ady an-trano naharitra 36 taona ireo manampahefana, araka ny nomarihan'ny mpanao gazety Allan Nairn:
Nilaza an-kolaka ny fiverenan'ny ady i Álvaro Arzú, mpanakarembe sady filoha teo aloha izay manana ny herin-tsainy manokana, raha toa ka tsy voaroaka ny lehiben'ny mpiady amin'ny kolikoly ao Goatemala.
Namaritra ny fiaraha-miasan'i Arzú miaraka amin'i Morales ho “fifanarahan-kolikoly pôlitisiana” ireo mitaky ny fialan'ny filoha, famaritana iray izay nanjary lasa tenirohy ary nameno ny tambajotran'i Goatemala: #PactoDeCorruptos.
Manangana tanana ianareo manohana famatsiam-bola tsy ara-dalàna.
Rehefa tohanan'ny filoha any am-ponja ianao, Otto Perez Molina sy ilay mpandositra iray izay nanao ny fanonganam-panjakana antsoina hoe Serrano Elias. Krizim-Panjakana
Afaka andro vitsivitsy dia hanomboka ny dingana ahazoana ny fanomezan-dàlana avy any amin'ny Fitsarana Tampony amin'ny fanesorana ny tsy azo itsarana ny filoha. Raha manohana azy ny manampahefana monisipaly dia niha-marobe kosa ny isan'ireo Goatemalteka izay niverina eny amin'ny kianja malalaka avy amin'ny tanàndehibe maro samihafa mitaky azy hiala.